पर्साको नगरपालिकामा दमकल छैन नेता तथा कर्मचारी भारतको मुख ताक्दै !! | शुभ दिन
पर्साको नगरपालिकामा दमकल छैन नेता तथा कर्मचारी भारतको मुख ताक्दै !!
पोखरीया नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको वशिष्ट नारायण वर्णवालको घरमा शनिबार आगलागी भयो । बिहान पौने ९ बजेतिर लागेको आगो निभाउने दमकल नहुँदा अढाई घण्टापछि मात्रै नियन्त्रणमा आयो ।
बिजुली सर्ट भएर भएको आगलागीमा १५ लाख जतिको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । आगो नियन्त्रणका लागि वीरगञ्जबाट बारुण यन्त्र लग्नु परेका कारण आगलागीबाट बढी क्षति भएको हो ।
पोखरीयाका धर्मेन्द्र चौरसियाले पोखरीयाको बारुण यन्त्र सञ्चालनमा नआएकै कारण शनिबारको घटनामा बढी क्षति भएको बताए । ‘पोखरीया नगरपालिकाको दमकल सञ्चालनमा रहेको भए, शनिबारको आगलागीमा त्यत्रो क्षति हुने थिएन,’ उनले भने ‘पोखरीया नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै भएको आगलागी निभाउन वीरगञ्जबाट दमकल ल्याउनुपर्दा समय लाग्यो र बढी क्षति भयो ।’
वारुण यन्त्र छिट्टै पुग्न सकेको भए आगलागीबाट त्यति क्षति नहुने स्थानीय बताउँछन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरीया, सशस्त्र प्रहरी बेसक्याप पोखरिया र स्थानियबासीले सदरमुकाम वीरगञ्जबाट गएको बारुण यन्त्र (दमकल)को सहयोगमा अढाई घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
पोखरियाको दमकल प्रहरी कार्यालयमा थन्कियो
पोखरीया नगरपालिकाको वारुणयन्त्र चालु अवस्थामा नरहेको कारण आगलागी समयमै नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भए । स्थानीयले नगर प्रमुख दीपनारायण रौनियारको विरोधमा नाराबाजी गर्नुको साथै तुरुन्त वारुण यन्त्र सञ्चालनमा ल्याउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
पोखरिया नगरपालिकामा गत असारमा ५२ लाख रुपैयाँको लागतमा दमकल खरिद गरिएको छ । तर कर्मचारी अभावमा दमकल एकपटक पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नयाँ बारुणयन्त्र ८ महिनादेखि अलपत्र छ । पोखरिया नगरपालिकाले बारुण यन्त्र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा थन्क्याएर राखेको स्थानीय दिनानाथ साह बताउँछन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया परिसरमा खुल्ला स्थानमा राखेका कारण घामपानीले गर्दा दमकलमा खिया लाग्न शुरु भइसकेको छ ।
१४ वटा स्थानीय तह रहेको पर्सा जिल्लामा १ महानगर, तीन वटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा तीन वटा दमकल छ तर काम लाग्ने एउटा मात्रै छ । एउटा पहिलेदेखि नै विग्रिएर थन्किएको छ । एउटा सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागीमा जलेको थियो ।
पोखरीयामा एउटा दमकल छ । त्यो प्रयोगमा छैन । त्यसले गर्दा पर्सा मात्रै नभएर छिमेकी जिल्लामा आगलागी हुँदा वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै दमकलको भर छ ।
अब सुख्खा मौसम शुरु भएका कारण हावाहुरी चल्नेवित्तिकै आगलागीका घटना बढ्छ । जिल्लाको एक छेउमा रहेको सदरमुकाम वीरगञ्जमा मात्रै दमकल भएका कारण आगलागीको घटना भएको ठाउँमा दमकल पुग्न धेरै समय लाग्छ ।
पोखरीया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले कर्मचारी नभएर दमकल सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै छिट्टै प्रयोगमा ल्याउने बताए । ‘दमकल आउँदा नै चुनावी आचारसंहिता लागिसकेको थियो, कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले चालकसहित ४ जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन्, भोलिबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हामीले गरेका छौं ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सुख्खा मौसम नजिकिएको कुरालाई मध्यनजर गरेर दमकल मर्मत गर्ने र नयाँ खरिद गर्ने प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाएको प्रवक्ता सुमन श्रेष्ठले बताए । ‘महानगरमा संख्यात्मक रुपमा तीन वटा दमकल छ तर काम लाग्ने एउटा मात्रै छ । एउटा मर्मत भइरहेको छ, एउटा खरिद प्रक्रियामा छ । अनि एउटा दमकलका लागि वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावाससँग आग्रह गर्ने कुरा छ ।’
उनले भने, ‘सुख्खा मौसममा आगलागीका घटना बढी हुने भएकाले कम्तीमा तीन वटा दमकल चालु अवस्थामा राख्ने सोच हामीले बनाएका छौं ।
बहुदरमाई र पर्सागढीमा छैन दमकल
गाउँपालिकाको त कुरै छाडौं । पर्सा जिल्लामा रहेका दुईवटा ठूला नगरपालिकामासमेत दमकल छैन । दमकल नहुँदा आगलागी नियन्त्रण गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
पोखरीया बाहेक पर्सा जिल्लामा बहुदरमाई र पर्सागढी गरी दुई नगरपालिका छन् । ती दुवै नगरपालिकामा आकस्मिक सेवाका लागि दमकल छैनन् । न दमकल खरिदका लागि तयारी नै भएको छ ।
सुख्खा मौसम शुरु भइसकेको भएपनि दुवै नगरपालिकाले दमकल खरिदका बारेमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र साहले यस वर्ष दमकल खरिद गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए । ‘यसपालि नगरमा दमकल खरिद गर्ने कुनै योजना छैन । एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आम्दानी कम छ । नगरपालिकामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या छ । वीरगञ्ज र पोखरीयामा दमकल छ, त्यसैबाट काम चलाउने सोचमा छौं ।’
उनले नगरभित्र रहेका पोखरी ठेक्कामा लागेपछि आन्तरिक आम्दानी बढ्ने र त्यसपछि मात्रै दमकल खरिद गर्ने योजनामा आफू रहेको सुनाए ।
पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादवले पनि नगरपालिकामा वारुण यन्त्र नरहेको बताए । ‘सुख्खा मौसममा गाउँघरमा आगलागीका घटना बढ्छ । तर नगरपालिकामा बारुण यन्त्र छैन । तत्काल खरिद गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ प्रमुख यादवले भने, ‘केन्द्रबाट दिने कुरा पनि सुनेको छु, केन्द्रले पठाएन भने खरिद गर्नुपर्ला ।’अनलाइन खबर बाट लिएका हौ